मलाई बल्ल सेक्सको स्वाद थाहा भयो । - Desi Sexy Stories
Home » Nepali Sex Stories » मलाई बल्ल सेक्सको स्वाद थाहा भयो ।
कहिल्यै नआउने मान्छे अचानक आउँदा अचम्म लागेर सोधेको नि,’ उसले कुरा अघि बढायो ।चुलोबाट उसले चाउचाउ निकाल्यो । ‘खाने हो ?’ उसले मतिर हेर्दै सोध्यो । ‘चाखौं न त,’ ऊसँग नजिक हुने मौकाको प्रतिक्षामा मैले भनेँ ।एउटा कचौरामा मलाई चाउचाउ दिदैं ऊ पनि अर्को कचौरामा लिएर खान बस्यो । चाउचाउ खाइसकेपछि केहीबेर हाम्रो सम्बाद बन्द भयो । के कुरा गर्ने भन्नेमा म अन्यौलमा थिएँ, सायद ऊ पनि त्यस्तै अन्यौलमा थियो ।ऊ कचौरा उठाउँदै थियो । मौका छोपेर मैले उसको लाडो भएनिर हात पुर्‍याएर भने, ‘म उठाइ हाल्छु नि ।’ तर मेरा हातले उसको लाडो भेटेन क्यार, मैले केही पत्तो नै पाइनँ । ऊ झसङ्ग भएको थियो । तर केही भनेन । सिर्फमेरो अनुहार आर्श्चर्यजनक रुपमा हेरिरहृयो । ‘के हेरेको नि,’ मैले परिस्थितीलाई अन्यत्र मोड्ने कोसिसका साथ भनेँ ।’तिमी पनि हुर्किछौं भनेर हेरेको नि,’ उसले भन्यो । ‘किन र ?,’ मैले सोधेँ । ‘केही हैन, भइ गो,’ उसले छोटो जवाफ दियो । म कुरा अघि बढाउन चाहन्थेँ ।
तिमी भन्दा दुइचार वटा भोटो बढी नै फटाएको छु, खायौ ?’ उसले भन्यो । मलाई निकै आनन्द लागिरहेको थियो । उसले अझ बढी यसरी नै मलाई चलाइरहोस् भन्ने मेरो मनमा थियो । अनि मैले च्याप्प उसको लाडो समातिदिएँ । तर अहिले त उसको लाडो निकै ठूलो पो भइसकेको रहेछ ।
लौ, अघिसम्म त केही नभएजस्तो थियो, अहिले त यत्रो ठूलो भइसकेछ, के भाको ?’ मैले छक्क मान्दै साधेँ । ‘सँधै यत्रै ठूलो भइरहे त यसलाई कसरी तह लगाउनु नि ?’ उसले भन्यो । उसले भनेको कुरा मैले बुझिनँ । अनि उसलाई सोधेँ, ‘किन र ? यो ठूलो हुँदा के हुन्छ ?”के थाहा नपाएजस्तो गरेकी ? यो ठूलो भएपछि यसलाई शान्त पार्न केटी चाहिन्छ क्या ।’ उसले भन्यो ।
ए.. त्यस्तो पो ।’ मैले बल्ल बुझेँ । अनि महसुस गरेँ, अब उसलाई पनि केटी चाहिएको छ । मुख खोलेरै भनेँ, ‘त्यसो भए अहिले यसलाई केटी चाहिएको हो त ?’ अनि उसले पनि जिस्किदैं जवाफ थियो, ‘किन र ? तिमी मान्छ्यौं ?”के गर्न ?’ अलिअलि बुझे पनि मैले नबुझेजसरी सोधेँ । ‘पहिला मान्छु त भन न, के गर्ने भन्ने कुरामा त म छँदैछु नि ।’ उसले भन्यो । ‘भन्दै नभनिकन मैले के मान्नु नि ? के गर्न भन्नु न त ?’ उसले आफ्नो लाडोतिर संकेत गर्दै स्पष्टसँगै भन्यो, ‘यसलाई त्यहाँ छिराउन, हुन्छ ?’बल्ल कुरा सही मोडमा पुगेको थियो । तै पनि ऊबाट अझ प्रष्ट कुरा सुन्ने उद्देश्यले मैले सोधेँ, ‘त्यसलाई यहाँ छिराउँदा के हुन्छ ?’
उसलाई रश्मी भन्ने साथीले फोन गरेकी छ भन्दै उसको ममी बोलाउन आउनु भयो । हामी एउटै क्लासमा पढ्ने साथी भएकाले उसका सबै साथी मेरा पनि साथी थिए । तर रश्मी नाम गरेको साथी मैले चिन्न सकिनँ । फोनमा कुरा गरिसकेर ऊ फर्किएपछि उसलाई मैले सोधेँ, ‘रश्मी भनेको को हो ?’उसले मेरो प्रश्नको जवाफ नदिइकनै टार्ने कोसिसमा भनि- ‘छाड्दे न यार ।’ मलाई उसको कुराले चित्त बुझेन । अनि सोधेँ, ‘मैले नचिन्ने पनि तेरो साथी छन् र ?’ तर पनि उसले रश्मीको बारेमा राम्ररी भनिन । मैले कर गरेरै सोधेँ- ‘भन न को हो ? मैले चिन्नु नहुने हो र ?’अनि उसले भनि, ‘सीमराकै एक आइमाइ हो, कोही गेस्ट आएको छ रे । त्यही भएर एक घण्टामा आउनु भनेर बोलाएकी ।’ छक्क मान्दै मैले फेरि सोधेँ, ‘उसको गेस्ट आउँदा तलाई किन बोलाउनु पर्‍यो ?’ उसले मलाई सबैकुरा नबताइ सुखै पाइन ।अनि भनि, ‘एउटा गेस्टसँग बसेर ३-४ घण्टा बिताउँदा ५ हजार पाइन्छ यार । आफूलाई पनि मज्जा, अनि पैसा पनि हुने ।’उसको जाने बेला भइसकेको थियो । उसले भनि ‘बरु हिडँ, तलाई पनि म चिनाइदिन्छु ।’ मलाई उसको कुराले दोधारमा पार्‍यो । उसको घरबाट सँगै निस्कियौं तर बाटोमा उसले धेरै कर गरेका कारण म पनि ऊसँगै गए ।गाउँबाट अलि पर एक तले एउटा घरमा हामी पस्यौं । पाँच कोठे सो घरको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नासाथ एउटी आइमाइ र दुइ पुरुष देखियो । अरु कोठा बन्द थिए । ती पुरुषले बियर पिइरहेका थिए । अनि आइमाइ चाँही मासु चिउरा खाँदैथिइ ।’बस दीपा । ऊ को हो नी ?’ आइमाइले सोधी । दीपाले जवाफ दिइ- ‘यो मेरो साथी हो, कबिता ।’ हामी एकातिरको सोफामा बस्यौं । मलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो । सामुन्ने बसेका दुइ पुरुषले मलाई र दीपालाई पालैपालो गिद्दे नजर लगाइरहेका थिए ।’केही खाने हो ?’ आइमाइले हामीतिर हेर्दै सोधी । ‘भर्खर खाना खाएको, भै गो केही नखाउँ,’ दीपाले भनि । यत्तिकैमा एउटा पुरुषले भन्यो, ‘चिसो लिए भइहाल्छ नि, कुल भएर बस न ।’आइमाइ जुरुक्क उठेर पल्लो कोठामा गइ दुइवटा कोक लिएर आइ । ‘ऊ पनि मेम्बर नै हो ?’ आइमाइले मतिर इशारा गर्दै दीपासँग सोधि । अनि दीपाले भनि, ‘होइन, मेरो घरमा आएकी थिइ अनि यहाँसम्म मसँगै आएकी ।”कुरा मिले मेम्बर बनाए भइहाल्छ नि,’ अर्को पुरुषले भन्यो । अनि दीपालाई त्यो आइमाइले पल्लो कोठामा लिएर गइ ।
चाकतिर हुलिरहेको केटाले केहीबेरमा लाडो झिक्यो र हातले खेलायो । उसको लाडोबाट बिर्यको फोहोरा छुट्यो दीपाको ढाडमा । दीपाले बीर्य खसेको ठाउँमा हात लगि, उसको हातभरी लाग्यो । उसले तन्दामा हात दली । अनि उत्तानो परेको केटाले दीपालाई सर्लक्क पल्टायो र आफू दीपामाथि घोप्टिएर दनादन पेल्न थाल्यो । दीपा उँ.. उँ.. गर्दै थिइ । केही बेरमा ऊ पनि शान्त भयो । उसले चाँही दीपाको पुतीमै बीर्य झार्‍यो । ‘आमै..भित्रै झारेको ?’ दीपाले भनि । केटो केही बोलेन । अनि ती केटाहरु पलङमा पल्टिएर सुस्ताउन थाले । सायद उनीहरु निकै थाकेका थिए । मैले सोचेँ यिनीहरुलाई अब पुगिसक्यो । मलाई त्यसै छोड्लान् । तर मेरो सोचाए गलत रहेछ । टेबलमा रहेको पmुटी खाँदै एउटाले भन्यो, ‘आउ न मैया, यता बस ।’ म आफ्नै ठाउँमा बसिरहेकी थिए ।
उनीहरुमा दया, माया थिएन ।एउटाले मेरो दुध बेस्सरी चुस्यो, मासु नै लुछिएला जस्तो भयो । ‘दुख्यो, बिस्तारै गर्नुस् न ।’ मैले भनेँ । ‘पोटिलो छ यार,’ उसले दुध चुस्दै भन्यो । अर्कोले दुबै हातले पुती च्यात्दै भन्यो, ‘यो पनि टाइट नै छ त यार ।’अनि पुती च्यात्दै गरेको केटो जुरुक्क उठ्यो र आफ्नो साथीलाई भन्यो, ‘यार यसलाई टेस्ट गरौं न, एक छिन मलाई फ्री छोड त ।’ अर्को केटाले उसको आदेश मान्दै मलाई छोड्यो ।
ओह.. ‘ मेरो मुखबाट आवाज निस्कियो । उसमा जोश आइसकेको थियो, म पनि भयमिश्रति जोशमा नै थिएँ । ‘च्याप्प समातेको छ यार, टाइट रहेछ,’ उसले लाडो ठेल्दै भन्यो । अनि फटाफट पेल्न सुरु गर्‍यो । ‘स्वाट स्वाट पेल्दा मलाई पनि आनन्द लागि रहेको थियो । मलाई कुनै बेला दुखेजस्तो पनि भइरहेको थियो । अनि आफ्ना हातले उसलाई पछाडी ठेल्थेँ, तर उ भने मलाई जोडले समातेर फटाफट आफ्नो काम गरिरहेको थियो । तीन चार मिनेटसम्म यो क्रम चलिरह्यो । त्यतिबेला मलाई पोल्न थालिसकेको थियो । उसको गति पनि निकै बढिसकेको थियो ।
अनि उ तम्सियो ममाथि । मैले उसलाई सम्झाउने प्रयास गर्दै भनेँ, ‘नाइ.. अब नगर्नुस् प्लीज.. म सक्दिनँ ।’ तर ऊ किन मान्थ्यो र ? मेरा खुट्टा फट्याएर लम्पसार पर्दै उसले छिराउन थाल्यो । यस पटक मलाई साह्रै गाह्रो भयो । ‘नाइ भन्या.. दुखिरहेको छ, मलाई छोड्नुस् प्लीज..।’ मैले भनेँ । अनि त्यो केटाले आफ्नो साथीलाई भन्यो, ‘ओइ यसको मुख बुझो लगा त..।’ त्यसपछि अर्को केटो मेरो मुखतिर आएर आफ्नो लाडो झुन्ड्याउन थाल्यो ।उसले मेरो ओठमा लाडो दल्यो । चिसो लाडो देखेर मलाई सिकसिको लाग्यो ।
श्रीराम को घोर्ले लाडो र मेरो चिप्लो पुती